ဘရုစ် Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / Menswear / ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ / ဘရုစ် Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
categories: Menswear, ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ
ပုံနှိပ်ပါ Size ကို
အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်: S /M /L /XL
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး BRUCE TEE TUTORIAL ဒီမှာ.
အားလုံးပုံစံများကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် print ထုတ်ခွင့်ပြုပါရန်အပြည့်အဝစကေးစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်လာအဖြစ် A4 နဲ့အမေရိကန်ပေးစာစာရွက်စာတမ်းများသုံးနိုင်.
တိုင်း download, အရောင်ကားချပ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သင်ခန်းစာနှင့်တကွကြွလာ. သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်အကောင့်ဧရိယာကနေဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်လှေတျတျောမူသငျ့ရဲ့တိကျတဲ့ download link ကိုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ပုံစံကိုအချိန်တစ်ရပ်န့်အသတ်ငွေပမာဏကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. အနာဂတ်အသုံးပြုရန်သင့်ကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက်ဖိုင်တွေကို Save.
မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်တစ်ဦးက 1.5cm ချုပ်ရိုးစရိတ်အားလုံးပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းအပေါ်ပါဝင်သည်.
လျင်မြန်စွာ Links များ:
pattern ပိုစတာပုံနှိပ်ဖို့ Adobe Reader ကို အသုံးပြု. ဘယ်အရွယ်အစားစာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည့်တစ်ဦး fullscale copyshop PDF ဖိုင်ရယူရန်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်လာ. ဒါ့အပြင် A4 နဲ့အမေရိကန်ပေးစာပေါ်သို့တက်ကျိုးပဲ့ရရှိနိုင်စာမျက်နှာများကိုသုံးနိုင်. အဆိုပါသီးခြားစာမကျြနှာသငျသညျပုံနှိပ်ပြီးနောက်မှန်ကန်စွာတစ်ဦးချင်းစီစာမျက်နှာ align ကိုကူညီစာမျက်နှာနံပါတ်များနှင့်အမှတ်အသားများရှိ.
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ပုံနှိပ်ညွှန်ကြားချက်များ တိကျစွာစကေးရန်သင့်ပုံစံ print ထုတ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့မှ.
Tee: Copyshop အရွယ်အစား: 45စင်တီမီတာ x 82cm / A4 စာမျက်နှာများ:9/ အမေရိကန်ပေးစာ: 12
ကြာမြင့်စွာအင်္ကျီလက်: Copyshop အရွယ်အစား: 28စင်တီမီတာက x 71cm / A4 စာမျက်နှာများ:6/ အမေရိကန်ပေးစာ: 6
SHORT အင်္ကျီလက်: Copyshop အရွယ်အစား: 28စင်တီမီတာက x 32cm / A4 စာမျက်နှာများ:4/ အမေရိကန်ပေးစာ: 4
အားလုံးပုံစံ downloads, အင်္ဂလိပ်၌နေသော ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, သို့သော်သင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်နှစ်သက်သောဘာသာစကားရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဤအရပ်၌သင်၏ရွေးကောက်သောဘာသာစကားမှာသင်ခန်းစာကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ “ဘာသာ” မည်သည့်စာမျက်နှာရဲ့ညာဘက်ထိပ်မှာ menu ကိုဆင်းတစ်စက်ကနေသင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားရွေးချယ်ခြင်း.
သုံးသပ်ချက်ကိုရေးပေးပါ။ဘရုစ် Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ” ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်
မင်းဖြစ်ရမယ် logged in လုပ်သည် သုံးသပ်ချက် post ရန်.
£5.50 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
swimsuit ပုံစံများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး View